साउदीमा हुनुहुन्छ ? कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन यसो गर्नुहोस् | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
साउदीमा हुनुहुन्छ ? कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन यसो गर्नुहोस्
जेठ ६, २०७८ बिहिबार ९:३०:१३ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डौ – तपाईँ साउदी अरेबियामा कार्यरत हुनुहुन्छ ? यदि नुहुन्छ भने खोप लगाउनका लागि मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत दर्ता भई खोप लगाउने मिति र समय निर्धारण गर्न भनिएको छ ।
साउदी सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पनि निःशुल्क खोप प्रदान गरिरहेको छ । साउदीमा खोप लगाउनका लागि मोबाइल एप्लिकेशनहरु Sehhaty, Tawakkalna मार्फत मिति र समय पूर्व निर्धारण गर्नुपर्छ । अहिले यही एपमार्फत मिति र समय पूर्व निर्धारण गर्नेहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप प्रदान गरिरहेकाले जतिसक्दो छिटो दर्ताभइ खोप लगाउन साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।
कोरोना महामारीको कारण साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दिइने सेवाहरू बन्द गरेको छ । कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि दूतावासले अनलाइन र फोनमार्फत अति आवश्यक सेवा भने दिइरहेको जनाएको छ ।
यस्तै साउदीकै जेद्दामा रहेको कन्सुलेट जनरलले पनि भौतिकरुपमा प्रदान गरिने सेवाका क्रममा भीडभाडलाई कम गरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्च सावधानी अपनाएको छ । सेवा लिन आउने नेपालीहरूलाई पनि विभिन्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
कन्सुलेट जनरलमा कन्सुलर सेवा, पासपोर्ट नवीकरण जस्तो अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू कामका लागि कन्सुलेट जाँदा अनिवार्यरुपमा पूर्व जानकारी तथा समय लिएर मात्र जानुपर्ने छ ।
त्यसका साथै सेवाग्राहीका साथ आउनुहुने सहकर्मी, चालक, नातेदार लगायतलाई कार्यालय परिसरभित्र नल्याउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
कोभिड सङ्क्रमण अवस्थाबारे जानकारी दिने मोबाइल एप्लिकेशन Tawakkalna (Covid-19 KSA) मोबाइलमा डिस्प्ले गराई अनिवार्य रुपमा कन्सुलेट जनरलको रिसेप्सनमा देखाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ ।